Technology Archives - Kanaung News
* အသုံးများသော အတိုင်းအတာများ * 12လက်မ = 1 ပေ 3ပေ = 1 ကိုက် 22 ကိုက် = 1 သံကြိုး 10 သံကြိုး = 1 ဖာလုံ 8ဖာလုံ =1 မိုင် 16 အောင်စ = 1 ပေါင် 14 ပေါင် = 1 စတုန်2စတုန် = 1ကွာတ4ကွာတ = 1 ဟန်ဒရိတ် 20 ဟန်ဒရိတ် = 1 တန် Units of Length ************** 1 centimetre […]
Posted in: Articles, Knowledge, TechnologyTagged: Article, Knowledge, TechnologyLeaveacomment
ကလေးများနှင့် အင်တာနက် မွန်းကြပ်မှုကို ဖောက်ခွဲခြင်း တနေ့က မန္တလေးတွင် ဖြစ်သော ယာဉ်တိုက်မှုတွင် တိုက်သော ကောင်လေး၏ ရည်းစားကောင်မလေးက သူ့ချစ်သူဘက်မှ ရပ်တည်မည်ဟု စာတင်သည်။ ထိုကောင်မလေးကိုအုံနှင့် ကျင်းနှင့် ၀ိုင်းဆဲကြသည်။ ကျွန်မတို့ မမှားဟု ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘာညာ ဆက်ရှင်းသည်။ ထိုအောက်တွင်လည်း ၀ိုင်းဆဲသည်။သွားကြည့်မိသော အချိန်တွင် ဆဲထားသော ကွန်မန့်ပေါင်းခြောက်ထောင်ကျော်နေပြီ။ ယုတ်ယုတ်မာမာတွေလည်း ပါသည်။ မကြားဝံ့မနာသာတွေလည်းပါသည်။ ထိုမျှ ဆဲရန် လိုပါသလော။ ပြောလိုသည်က ဒီကလေးမှ အပြောမတတ်သည်က တပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အပြောမတတ်သည်ကို အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ကွန်မန့်ပေါင်းထောင်ချီ၍ ဆဲကြသည်ကတော့ကောင်းစေချင်၍ဟု မမြင်နိုင်တော့ပါ။ ကောင်းစေချင်၍ မိဘက တစ်ချက်ရိုက်လျှင်လက်ခံသည်။ သို့သော် လူပေါင်းများစွာက တယောက်တစ်ချက် ၀င်ရိုက်ကာကောင်းစေချင်၍ပါဆိုသည်ကတော့ မဖြစ်နိုင်။ တချက်စီက မသေနိုင်သော်လည်းအချက်ပေါင်း များစွာဆိုလျှင် သေနိုင်သည်။အခုလည်း […]
Posted in: Articles, Knowledge, TechnologyTagged: Article, KnowledgeLeaveacomment
ခလုတ်ပိတ်ထားသော်လည်းလျှပ်စစ်ဓာတ်ကိုစွဲယူသုံးစွဲနေသောပစ္စည်းများ မကြာသေးခင်ကလည်း လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲခတွေလည်း မြှင့်မယ်လို့ ကြားနေရပါတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း လျှပ်စစ်မီးကိုလျော့သုံးဖို့ ကြိုးစားနေကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် မသုံးစွဲပဲပိတ်ထားပေမယ့်လည်း လျှပ်စစ်အားသုံးကို စွဲယူသုံးနေတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဖုန်း Charger လူတွေတော်တော်များများက ဖုန်း အားသွင်းတဲ့ ခလုတ် (Charger) ကို ဖုန်းနဲ့ မသွင်းထားရင်တောင် ပလပ်ပေါက်နဲ့ ဒီအတိုင်း တပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုထားရင် ဖုန်းအားမသွင်းပဲနဲ့တောင် တစ်နေ့လုံးကို 1.2 W လောက် ကုန်နေပါလိမ့်မယ်။ TV Tuner တီဗီရဲ့ Channel လိုင်းလေးတွေကို ရှာပေးတဲ့ Digital TV Tuner လေးတွေကို တီဗီပဲ ပိတ်ပြီး Tuner ကို မပိတ်ပဲ ထားမိရင် တစ်နေ့ကို 22W ကုန်နေပါလိမ့်မယ်။ တော်တော်များများက […]
Posted in: Articles, TechnologyTagged: Article, TechnologyLeaveacomment
ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ ဓာတ်လိုက်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရင် ဘာလုပ်မလဲ
ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ ဓာတ်လိုက်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရင် ဘာလုပ်မလဲ ဓာတ်လိုက်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့လျှင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ အမြန်ဆုံးသွားရပါမယ်။ ၁။ လျှပ်စီးကြောင်းရှိတဲ့နေရာမှဝေးသောနေရာသို့ လူနာကိုရွေ့ပါ။circuit breaker, fuse box(သို့)Outside Switch တို့မှတဆင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုဖြတ်တောက်ပါ။မီးမပိတ်နိုင်လျှင် လျှပ်စစ်မစီးကူးနိုင်တဲ့ သစ်သားပြား၊ ပလပ်စတစ် တံမြက်စည်းရိုး၊ သစ်သားထိုင်ခုံ၊ ရာဘာခြေသုတ်ခုံတို့ကိုအသုံးပြု၍ဓာတ်လိုက်နေသူကို လျှပ်စစ်စီးကြောင်းမှ ဖယ်ထုတ်ပါ။ အကူအညီပေးလာသူရဲ့ ခြေထောက် (သို့) ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းက တစစ်စစ်ခံစားနေရလျှင် ဓာတ်လိုက်နေသူကိုမကူညီသေးဘဲ လျှပ်စီးကြောင်းစီးနင်းမှုမရှိတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးနေပါ။ ၂။ လိုအပ်လျှင် CPR ပြုလုပ်ပါ။အသက်မရှူတော့ရင် (သို့) နှလုံးခုန်ရပ်သွားလျှင် လူကြီးအတွက် CPR နဲ့ ကလေးအတွက် CPR နှစ်မျိုး ထဲကအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအလိုက် ကိုက်ညီတဲ့ CPR နည်းစနစ်နဲ့ အသက်ကယ်ပါ။ ဓာတ်လိုက်ခံရသူကလူကြီးဆိုလျှင် မိမိ၏လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုထပ်ပြီးရင်အုံနှစ်ဖက်၏ အလယ်၊ ရင်ညွန့်ရိုး အပေါ်မှာတင်ပါ။ကလေးငယ်ဆိုလျှင် ရင်ညွှန့်ရိုးပေါ်ကိုလက်နှစ်ချောင်းတင်ပြီးဖိပေးရပါမယ်။ မိမိ၏လက်နှစ်ဘက်ကို […]
ဒီနေ့တော့ Pile cap အကြောင်း လေး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ What is pile cap? အဆောက်အုံကိုထမ်းထားမယ့် အပေါ်ယံမြေသားက လုံလောက်တဲ့ ထမ်းအားမရတဲ့အခါ မာကြောတဲ့ ခပ်နက်နက်ကမြေသားအလွှာဆီ load တွေကို transfer လုပ်ဖို့အတွက် piles တွေကိုသုံးရပါတယ်။ columnတစ်ခုစီရဲ့ အောက်မှာ pile တွေဟာ column base load နဲ့ မြေ အပျော့အမာပ်ါမူတည်ပီး အုပ်စုလိုက်ရှိနေတတ်ပါတယ် အဲဒီအုပ်စုလိုက်အပေါ် column ကလာမယ့် load တွေ uniformly distributed ဖြစ်သွားဖို့ cap နဲ့အုပ်ပေးထားရပါတယ် အဲဒါ pile cap ပါ။ Pile cap အပေါ်သက်ရောက်နေတဲ့အားတွေက ဘယ်လိုလဲ? Pile cap က အားသက်ရောက်ခံရတာ […]
ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး *ဒီလို လုပ်နေကျပဲလေ* ဆိုတဲ့ ပြောနေကျစကားကို ကျနော်တို့ဆက် ပြောနေဦးမှာလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေး မှာ နောက်က ကျန်နေခဲ့မှာ သေချာနေပါပြီ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး (Digital Economy) ဆိုတာ ဘာလဲ ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးဆိုတာ အလွယ်တော့ Digital Computer Information and Communication Technology ကို အခြေခံတဲ့ စီးပွားရေးလို့ ဆိုပါတယ်။ အလွယ်ပြောရရင်တော့ ဂဏန်းပေါင်းစက်လို ဒစ်ဂျစ်တယ် စက်ကလေးမျိုးတွေက အစ ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊စမတ်ဖုန်း များ အလယ်၊ အဲဒါတွေအားလုံးကို ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အင်တာနက်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်လို ဗိုင်ဘာလို apps တွေ အဆုံး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ထိတွေ့ လို့ မရတဲ့ ဥပဒေ […]
Posted in: TechnologyTagged: TechnologyLeaveacomment